Qiso Qiiro leh wiil uu ku dhacey Covid9 – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO Qiso Qiiro leh wiil uu ku dhacey Covid9
Qoraal dheer oo uu ku bahiyey baraha bulshada wuxuu ku bilaabey COVID 19 BARASHO WACAN.
Ilaa hadda waxaan ku faraxsanahay inaan caafimaad qabo, ilaahay ayaa mahad leh, qufacii, candhuuftii, xumadii, Urtii iyo dhadhankii iiga maqnaa malihi waa wax alle loogu mahad naqo.
Labadii habeen ee u dambeeyay ma seexan gurigii qolka aan ka deganaa ee ku yaalay xaafada Daloodho. Waa labadii habeen ee aan ugu caafimaadka wanaagsanaa muddo afar maalmood ah oo ay xumad i haysay.
Waxaa habeenkii jimcihii anigoo qolkayga yar isku karantimeeyay muddo afar maalin oo ka horeysay isoo wacay ninkii aan guriga wada kireysnay oo isagu saddex maqsin ee kale deganaa. Saaxiibkay afar caruur ah iyo xaas ayaa u degan guriga aan ku wada noolyahay. Ilaa hadda waxaa uu ii iigu jiraa dadka wanaagsan inkasta oo aanu qalbigeygu u ahayn siddii uu ahaa habeenkii jimcaha markii aan moobilka ka wada hadalnay.
Caruurta oo aan aad u jeclahay walaalna aan la noqday waxay ahaayeen saaxiib iiga dhow kuwa aan la dhashey, xaaskayga, wiilkayga Khadar. Waayo? Iyagu way ila noolyihiin, markaan cadheysanahay iyagaan isku dajiyaa, markaan faraxsanahay iyagaan wakhti wada qaadanaa. Maaddaama oo aanan ahayn dadka ku badan suuqyada iyo meelaha la fadhiistana guriga inta badan anay ila joogaan. Sidaas ayaan u jeclahay saaxiibaday oo dhamaantood da’doodu ka yartahay shan jir.
Salaan kaddib saaxiibkay wuxuu ii sheegay in hooyadii u sheegtay in wiilkii guriga la galayay oo aniga ah( Ilyaas) uu ka shakisanyahay Carona Virus, sabab uu guriga uu caruurta ku korsanayo ugu sii joogaana aanay jirin. Waan yaabay waxaanan u sheegay in aanan jecleyn caruurtu inay xanuunka iga qaado amma aan sadheeyo. Waxaan u sheegay inaan iska joojiyay caruurtii oo aan is karantimeeyay. Qolkana aan hoosta ka xidho marwalba. Markii hore qolka ma xidhan jirin oo caruurta ayaan iskala ciyaari jiray marka aanan shaqo ku hayn guriga.
Faarax wuxuu ii sheegay in ilaahay xanuunka cid walba ku ridi karo caruurtana aan anigu uga ogaansho badanahay iska ilaaliyo oo markaan suuliga galayo af xidh ( facemask) iyo golofis aan gashado markaan suuliga galayo amma daarada ka baxayo.
Warsan ayaan ugu warceliyay waad mahadsantahay, waan ilaalinayaa caruurta, suuliga isticmaalkiisana waan joojin amma qalabkaas ayaan xidhan.
Duhurkii Jimcihii ayaan qado usoo tagay huteel aan wax ka cuno, cuntada waxaa la iigu ridaa one time oo fadhiga kuma xidho, gaadhigeyga anigoo saaran ayaan qaataa oo aan ku dhex cunaa amma guriga la galaa. Qof suuqa wax ka cuna ayaan ahay. Mana aan heli karin cid ii soo qaada oo aan baxniinka uga maarmo. Xaaskayga iyo wiilkayga iyo qaraabadana inaan xanuunka aan ka shakisanahay asiibo ayaan ugu dirsan waayay.
Tukaan aan biilka ka qaato anigoo qadadii gaadhiga ku dhex cunaya ayuu 50$ 889 igusoo galay. Waa magaca tukaan uu Faarax leeyahay. Markii aan wacay waxaan weydiiyay lacag uu iisoo diray waxaan ku qabto.
Faarax wuxuu iigu jawaabay “walaalo lacagta yar waxaan kuugu soo diray inaad magaalada iska gasho, hooyo ayaa shakiday oo dadkii oo dhan ayaa isoo wacaya, caruurtii iyo xaafadii waa isku dhex yaac markaa sidaas yeel”
Hoos ayuu u hadlayaa, waxaan u macneystay inuu igala xishoonayay hadalka haddana igu yidhi ee qushi. Markaas intii ka dambeysay waan cadhooday, waxaan ku wargeliyay inaan caawa gurigiisa fiidka uga baxayo ( habeenkii sabtida). Waxaan u celiyay lacagtii uu iisoo diray oo baahi iima haynin inaan haysto. Lacagtaasi waxaan kiro ugu jiro bishii May ee dhamaatay. Inuu meheradiisa ku buuxsado ayaan ku wargeliyay.
Siddii ayaan fiidkii alaabtaydii u xidhxidhay oo ay gurigii uga guuray. Waxaan is weydiiyay Faarax ma caafimaad ayuunbuu kugu haystay? Waase su’aal shaydaan oo waxaan kasoo qaaday inaanay waxba jirin. Waxaan ku xaliyay culeyskii inaan xasuustay sheekooyin ( warbixino) aan ka sameynayay HIV AIDS dadka la nool oo aan habeen iyo maalin ka werweri waxaa ay dadkaasi ku suganyihiin. Kuwaasi way samraan ee saxar kuma soo gaadhin ayaan shaydaankii u sheegay.
Wiil aan saaxiibnahay oo aan u sheegay in Covid 19 iskaga shakiyay oo aan biilka ka qaato marna horena ii sheegay inaanu waxkasta oo igu dhaca salaan amma meel igaga tagayn ayaan tukaankiisii tagay si aan ugu nafiso. Ninkii anigoo uga sheekaynaya waxaa igu dhacay ayay gabadh dumarkii wax ka iibsanayay ka mid ahayd sheekadayada ah in gurigii aan sidaas uga imid.
Waan iskaga tagay habeenkii saaxiibkaygii nafta ii hurayay, wiilkii meherad ayuu lahaa wado kusoo jeeda xaafadaha ku dhow ayuu suuliga ka galayay maaddaama aanu suuliyada lacagta la qaato u dhaweyn. Aroortii markii uu suuliyadii xaafadaha ka gal is yidhi ayaa loo diiday inaanu gali karin oo uu la kulmay ninkii COVID19 la noolaa. Kkkkkkk
Islaantii ayaa sheekadii xaafada u gelisay arintaas, reerkoodii waa lagu diray oo biilkii ay ka qaadan jireen waxay ku wargeliyeen inuu ugu soo diro Zaad. Waan u ogahay saaxiibkay kaalintii. Mana jecleysan inuu dhibtaas ii maro. Tukaankiisii in la iska daayo ayay u dhowdahay imika. Hadda lama jooge ee garo.
Maanta oo Axad ah agaasimaha shaqaalaha ee wakaalada biyaha Hargeysa waxaa uu shaqadii fasax 15 maalmood ah uga diray aabahay Cabdi Cali Dable. Waxaan u maleeyaa in maareeyaha oo ah nin aan isku dhownahay aabahay lexejeclo uga fasaxay shaqada. Aabahay ismaanaan arag muddo afar bilood ah haddaanan ilowsanayn. Waxaanu ka wada hadalnaa telefoonka. Shalay ayuu ila soo hadlay oo makuu yimaadaa igu lahaa. Waxaan u sheegay inaan caafimaad qabo alxamdulilaah waanan caafimaad qabaa beri ayaan soo mari doonaa shaybaadhkii aan isku eegayay mar labaad.
Wacyigelin ayaan facebook usoo dhigay inaan xanuunkaas iskaga shakiyay marna kuma fikirin in jawaab celin noocan ah aan la kulmeyno. Waxaa qof walba igu canaananayaa inaan khaldamay markii aan shakiga xanuunkan soo dhigay baraha bulshada. Laakiin uma joojin oo anigaa saxsan.
Ma jilicsani, ma lacag li’i, baahina ma qabo. Anigoo intaas ka jilicsan maxay sameyn lahaayeen? Waar kuwa guryaha dadka la deganoow is ogaada oo hadda weelaysta. Waxaan la noolahay walaalkay Mahad Jama Koronto iyo walaashey Wardasagal Axmed Rooble😘
Is ilaali. Dadka ilaali.
Xigasho oo ah bukaaka xanuunku ku dhacey Ilyaas Cabdi Cali
Previous articleSaameynta COVID19 Aduunka iyadoo Dhimashada gaadhey 400,000
Next articleItoobiyaa Tiradii ugu badney oo hal maalin u dhimatey COVID19
Maalin Keliya Ayay Maalqabeen Wada Noqdeen